UMacbeth kaShakespeare. Evolution kubuhlobo beBanquo kunye neMacbeth | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Uvavanyo, Ababhali, Iincwadi, Ithiyetha
Umzekeliso weqweqwe: (c) uRafael Mir. Enkosi, Master Mir.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndiphonononge uhlobo oluhle lwe Macbeth NguJo Nesbø. Ndathetha nge Isincoko soncwadi into endiyenzileyo ngeentsuku zam zekholeji umfundi ka-F. Inglesa Ngokucacileyo ebandakanya ukufundwa komsebenzi we Shakespeare. Iphawuliwe Macbeth njengam isihloko esithandwayo kwaye yaqaqambisa eyona nto yanditsala ngayo kule klasi: ubuhlobo phakathi komntu ophambili kunye nokapteni wakhe uBanquo kunye nendlela eguquka ngayo. Kwaye into kukuba, mhlawumbi ngaphezulu kukaMacbeth okanye uLady Macbeth, ndiyithandile iBanquo ngaphezulu kwako konke kunye nomlinganiswa UMcDuff.
Ndiye ndakwazi ukuhlangula eso sincoko kwimisebenzi yokukhangela eyoyikisayo phakathi kwamaphepha aliwaka agciniweyo. Eyokuqala, ngokucacileyo, yayiseSaxon endiyiguquleleyo. Ke, ngemigca ethobekileyo yabafundi ebhalwe ngaphezulu kweminyaka engama-20 eyadlulayo, ndiyathemba usondeze lo msebenzi ungafiyo kubafundi.
2.1 1. Ukuphendula kukaBanquo ngexesha lokudibana okokuqala namaGqwirha
2.2 2. Ukuwa okunokwenzeka kweBanquo kwisilingo seziprofeto
2.3 3. Izizathu uMacbeth ucinga ukuba kufuneka abulale uBanquo
Ukuzivelela kobuhlobo baba bantu babini yenye yezona zinto zibalulekileyo ekuqaleni kwentlekele iMacbeth, nokuba ithini na into yomntu ophambili. Yonke into sisiphumo esivela kwi- Iziprofeto ezintathu zamagqwirha kunye nokuba semngciphekweni kukaMacbeth ngokuchasene nabo ukuba ayibangelwa ziinkolelo ezilula, kodwa ngamabhongo amqhubela kwizenzo ezininzi ezimbi kamva.
UMacbeth wenza impazamo yokuba ezi ziprofeto zibini ziyinyani kuba oko kumkhokelela ekubeni acinge ngamandla akhe okufumana oko akufunayo esebenzisa iindlela zakhe. Ke i ukunyaniseka, eyona nto ibalulekileyo kubomi bukaMacbeth, kukumkani Duncan nabahlobo bakhe, kule meko, ukuba Banquo, inyamalale ngokupheleleyo. IMacbeth yonakaliswa kwaye uyazaphula zonke izifungo zakhe, ayeke ukuthembela kuye wonke umntu, amaxesha ngamaxesha kwanaye.
Nangona kunjalo, yintoni le ingokuzivelela kuloo nto Ubuhlobo bukaMacbeth noBanquo ukusuka kwindawo yesibini, nangona inguMacbeth owaphulayo, ngamabhongo noloyiko, ngokubulala umhlobo wakhe.
Ubume bentlekele yaseMacbeth bulula kakhulu. Ubukhulu be-protagonist sele busekiwe: uyalingwa, awela kweso silingo kwaye uyatshatyalaliswa. Kwenzeka into efanayo nakwiBanquo. Ukunyaniseka kwakhe kuMacbeth kunye nobuhlobo bakhe babunokumkhokelela kwindlela enye, ade anyathele umhlobo wakhe. ukuba wayemamele okanye alandele iziprofeto Amagqwirha kubantwana bakhe, abaya kuba ngookumkani, kodwa hayi yena.
Inokuqondwa into yokuba oku kunokwenzeka ukufikelela kwitrone kukwenza ucinge ngayo, kodwa U-Banquo akenzi nto kuba uyaqonda ukuba nasiphi na isilingo sinokuzibuyisa kwaye sizithengise. Nangona kunjalo, uyamnceda uMacbeth kwiinjongo zakhe ngokuhlala ecaleni kwakhe. Ke, Eyona nto iphambili kwiBanquo kukunyaniseka kokulungileyo nokungalungangaNgaphandle kwento yokuba ngaxa lithile uyakhalaza ngayo kwaye unomona ngekamva likaMacbeth.
Kodwa ukuze ubone indlela ubuntu bukaBanquo obukhula ngayo, kuya kufuneka ulandele amanye amanqaku:
1. Ukuphendula kukaBanquo ngexesha lokudibana okokuqala namaGqwirha
Ngaphambi kokudibana nabo UMacbeth noBanquo basebenze bonke. Iqinisekisiwe inkalipho nokuzingca Ekulweni nomkhosi wokumkani waseNorway kwaye ke ngoko ufikelela ezindlebeni zikaKing Duncan, ogqiba kwelokuba awonge uMacbeth ngesihloko somnye wabo boyisiweyo.
Kodwa emva kokubuya emfazweni, I-Banquo yeyokuqala ngubani obona amagqwirha kwaye abuze ukuba angobani ngaphandle kokubabonisa Akukho loyiko. Nangona kunjalo, amagqwirha aphendula kuphela ngokudumisa kunye nokuhlaba umkhosi kukaMacbeth, ohleli engakhange athethe nelizwi. Ukuva oko, uBanquo akoyiki kwaye, yintoni enye ebuzayo kutheni bengaprofethwanga kuye iimbeko ezinje ngeMacbeth kwaye ufuna impendulo, ebonisa ngethoni yamazwi akhe ukuba akoyiki:
... andiceli zintle okanye intiyo yabo, kodwa andiboyiki.
Apho kuyabonakala ukuba ngokuchaseneyo nobumbeko beMacbeth, Banquo ayichukumiswanga Ngale miyalezo imangalisayo, ubuza amagama oogqirha. Bakunika impendulo engalunganga okwangoku, kodwa okomzuzwana.
Mncinci kakhulu kunoMacbeth kwaye mkhulu kuye!
Andonwabanga kwaye ukonwaba kakhulu!
Kwaye kuya kuba njalo kuba iya kuba nkulu kuneMacbeth Enkosi kule ntembeko nesidima. Kwaye nangona eza kubulawa, ukufa kwakhe akuyi kuba buhlungu njengoMacbeth. Uqikelelo lokuba yi umzali womgca welifa kwitrone kuya kuzalisekiswa nonyana wakhe Ezokubaleka. Ke ngoko, nangona eswelekile, uBanquo uya kuba nethamsanqa ngakumbi.
Ke xa amagqwirha emkile kwaye uMacbeth eshiyekile ecinga ngento eyenzekileyo kwaye benqwenela ukuba axelelwe enye into, aba bahlobo babini bayazibuza ukuba babone ntoni na bakuva ntoni. Banencoko yokuqala apho bathetha khona malunga nento ezakuba yiyo kubo. Eli linyathelo lokuqala lakho Ukwahlukana kwexesha elizayo. Kuba nangona iyintetho nje malunga nento eyenzekileyo, kamva baya kuyazi ukuba iyintoni kanye kanye.
2. Ukuwa okunokwenzeka kweBanquo kwisilingo seziprofeto
Emva kokumazisa ngokuqeshwa kwakhe njengoBaron waseGlamis noCawdor, iziprofeto ezibini zamaGqwirha, UMacbeth umfanyekiswe ngumnqweno wokufumana isithsaba, ekubeni oko kwakungaprofetwanga kuye, kwaye akazukuyeka ukucinga ngaye. U-Banquo uza kuthetha kuphela ngemeko yengqondo ayibonayo kumhlobo wakhe ukusukela kuloo mzuzu kwaye amxelele ziya kuhlala zilandela. UMacbeth, ekubona oko, uthatha isigqibo sokuthetha naye kamva xa yonke into icacile kwaye izolile.
Ukusuka apho ukuya Ukubulawa kukaKing Duncan Kwinqaba likaMacbeth linyathelo elinye kuphela, ngaphandle kokungazithembi kwe-protagonist, efuna isibindi somfazi wakhe, ILady Macbeth, ukwenza ulwaphulo-mthetho. Kwangoko, ngelixa uMacbeth ecinga ngokungcatsha kwakhe, unenye Incoko emfutshane noBanquo, Ngubani okhona kunyana wakhe uFleance. UMacbeth uphinda athi xa banexesha, baya kuphinda bathethe ngeziprofetho kwakhona. UBanquo uyavuma, ephinda uMacbeth ukuba ukwinkonzo yakhe kwaye uhlala ethembekile kukumkani.
Kodwa abasayi kuphinda bathethe kwaye ukubulawa kokumkani ezandleni zikaMacbeth kuya kuhlala kufihliwe kuwo wonke umntu. Ke iBanquo yeyokuqala oyifunayo Cacisa izizathu zoko kufa kwaye ujonge naliphi na iyelenqe elinokubakho. Loo mazwi ayakwenza uMacbeth othuke kwaye amoyike.
Nangona kunjalo, I-Banquo nayo iqala ukukrokrela iMacbeth, xa sele ephumelele isithsaba kwaye ulawula kunye nomfazi wakhe. Oku kuchaziwe kwi i-monologue emfutshane ekhokelela kwindawo yokuqala yesenzo sesithathu. U-Banquo ubhekisa kwindlela uMacbeth akufezekisile ngayo konke ukuprofetwa kuye, kodwa woyika ukuba iindlela zomhlobo wakhe zinetyala kwaye ziqhutywa kukungcatsha nokuzimisela. Kwaye uyazibuza kwakhona, njengokuhlangana namaGqwirha, ngempumelelo kaMacbeth hayi eyakhe.
… Kutheni le nto bekungafanelekanga ukuba babe sisihombo kum kwaye ndinike ithemba?
Nantsi ibanquo nangoku ugcina ukuzithemba okuthile ukuba okwazisiweyo kuye kuyakufezekiswa kwaye kugcina ukuthembeka kwakhe ngoku eMacbeth njengokumkani wabo. Kodwa, njengokuba uMacbeth wenza, uBanquo wayenokucinga ngokungcatshwa komhlobo wakhe ngenxa yokungaqondi kakuhle kwamalungelo kaMacbeth. Nangona kunjalo, impendulo yakhe ayihambeli phambili. Kuphela Uyakhalaza yokudlala intlonti kukaMacbeth ukuthatha isithsaba kunye namandla.
3. Izizathu uMacbeth ucinga ukuba kufuneka abulale uBanquo
Yilapho uMacbeth eziva esengozini. Ngoku ungukumkani, kodwa uyayazi indlela ayiphumelele ngayo kwaye aqale ukungathembi kwanto, ke eyona ayoyikayo nguBanquo.
Konke oku kubonakala ngokucacileyo kwifayile ye- i-macbeth monologue kwindawo yokuqala yesenzo sesithathu. UMacbeth uyazi ngokunyaniseka kukaBanquo kunye nengqondo yakhe echanekileyo emenza ukuba enze ngokuzithemba okukhulu kuye. La ngamagama:
Akuncedi nto ukuzilawula ngale ndlela. Ukhuseleko kufuneka lundikhaphe ngokungathí sina. Ukuthandabuza kwam eBanquo kuyanda; kwaye ngokuchanekileyo kulawulo lobuntu bakhe into enokoyikwa kuye; Ininzi into ayinabuganga; kunye nomoya ongalawulekiyo wengqondo yakhe uhamba nengqondo ekhokelayo kwisibindi sakhe sokuzibonakalisa ngobulumko. Akukho mntu ngaphandle kwakhe ondoyikisayo […].
Ngoko ke, UMacbeth ubona iBanquo isisongelo esikhulu kulawulo lwakhe. Ngakumbi xa ecinga emva kwiziprofeto ezithi, ngaphandle kokumnika isithsaba kunye namandla akhawulezileyo, kukho umvuzo weBanquo kodwa uhlala uhleli njengotata womnombo wasebukhosini ngelixa engazange axelelwe ngalo mbandela. Ke uMacbeth uyaqonda ukuba oko kuyenzeka kungenxa yokuba uye wanceda ukuba kuzaliseke, ngokuba kunye netrone ukuyishiya koonyana baka Banquo, enkosi ukonakala kwakhe:
[…] Ndiwonakalisile umphefumlo wam ngenzala yeBanquo […].
Ngokuhambelana kufuneka usike ngaloo mvelaphiNdiyathetha, kufuneka abulale uBanquo kwaye, ewe, nonyana wakhe Ezokubaleka. UMacbeth uyakwenza njalo, kodwa ngokusebenzisa ezinye hitmen kwabo baxokayo babaxelela ukuba uBanquo lutshaba lwabo. Ukuba uBanquo usaphila, uMacbeth kunye nobukumkani bakhe ngekhe bakhuseleke kwaphela.
UBanquo ubulawa, kodwa hayi unyana wakhe. Esi siprofetho siza kuzalisekiswa kwaye emva koko intlekele iya kuqala eMacbeth. Oku kwenzeka kwindawo yesine yesenzo sesithathu, xa kwisidlo sikaMacbeth waziswa ngokusweleka kukaBanquo kunye nokubaleka kukaFleance, ke uyaxhalaba kwakhona de kube sisiphelo esibuhlungu.
Kule ndawo Umoya kaBanquo ubonakala kuye, ohamba ehlala etroneni njengophawu lokuba abantwana babo kungekudala baya kuba ngabo abaza kuhlala kuyo. Yiyo le nto ibangela ukuba ukuqala kobudenge bukaMacbeth. Kwezinye iingcali zomsebenzi esi siporho asibonayo kuphela isimntwiso soloyiko kunye nezoyikiso zikaMacbeth.
Sinokufumana umba wesithathu ongu Impembelelo uBanquo wayenokuba nayo kwiMacbeth. Bahleli kunye ngalo lonke ixesha, kwaye nangona uBanquo ehlala enyanisekile kwimigaqo yakhe uyabafihla eMacbeth, kuba akaqinisekanga ngokubulawa kukaKing Duncan ezandleni zakhe ukuze afumane itrone. Kwaye, njengoMacbeth, ucinga ngeziprofeto. Ke ngoko, Ukuba umhlobo wakhe akasifumani isihlalo sobukhosi, ngekhe abe nguyise wookumkani, ke ngoko ukhetha ukushiya izinto zinje. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba wayenokuba nefuthe kwizenzo zikaMacbeth.
Ngamafutshane, ukuvela kobu buhlobo iphawulwe ngu iziprofeto, ukwenzela yena i sigqibo kwaye umahluko omkhulu kwixabiso le amabhongo Kumlinganiswa ngamnye.
Malunga nomzobi uRafa Mir yonke into apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Uvavanyo » UMacbeth kaShakespeare. Indaleko kubuhlobo bukaBanquo noMacbeth